Hadii DF laga waayo 4-tan qodob ee soo socda waxa ay lamid noqon doontaa dowladihii hore (Akhriso) - Caasimada Online
Home Warar Hadii DF laga waayo 4-tan qodob ee soo socda waxa ay lamid...
Hadii DF laga waayo 4-tan qodob ee soo socda waxa ay lamid noqon doontaa dowladihii hore (Akhriso)
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Somalia ayaa xiligaan la kulmeysa caqabado Siyaasadeed oo kaga imaanaya dalalka shisheeye oo ay ugu horeyso Imaaraadka iyo qaar kamid ah Siyaasiyiinta kuwooda ku xiran shisheeyaha.
Caqabadaha ugu badan ee xiligaan heysta dowlada Federaalka ayaa ku xeeran mideynta danaha Siyaasadeed ee Somalia iyo mida Shisheeye, arbushaada dhanka Amniga iyo Siyaasada.
Dowlada Somalia ayaa waxaa loo adeegsanaya Maamul Goboleedyada ka jira dalka, kuwaa oo ku doodaaya in Dowlada Somalia ay ka weecatay Siyaasada ay kula dhaqmi laheyd dowlada Shisheeye.
Maamul Goboleedyada oo loo soo wakiishay sida ay Dowlada Somalia uga cadaadin lahaayen la dhaqanka Dowlada Imaaraadka ayaa ku doodaaya in Somalia aysan awood dhaqaale iyo mid Siyaasadeedba ku aadin Imaaraadka sidaa aawgeed ay muhiim tahay inay la midowdo Imaaraadka.
Hogaamiyayaasha Maamulada waxa ay ku andacoonayaan inaanu xushmad ka helin Dowlada Somalia sida Latashiga iyo loo qabto shirar ay ku kala warqaadanayaan.
Dhaliilaha Maamulada iyo Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa u badan in Dowlada Somalia ay dhinac isaga saareyso shaqsiyaadka ay talada kala dhexeysay.
Haddaba haddii DFS laga waayo 4-taan qodob waxaa ku adkaan doonta inay ka miro dhaliso Siyaasada afarta Sano ee aan dhex maquureyno:-
1-In maamul Goboleedyada ay kala tashato waxyaaha aan khaaska aheyn sida Amniga, Dhaqaalaha iyo Siyaasada.
2-In Dowlada Federaalka ay mudnaan gaara siiso Siyaasiyiinta Mucaaradka si qudhooda ay qeyb uga qaatan masiirka dalka oo mid guud ah.
3-In Dowlada Federaalka ay ahmiyad gaara siiso Odayaasha dhaqanka oo waayadan u muuqda kuwo aan muuqan, sababo la xiriira la-tashigooda oo meesha ka baxay.
4-In Dowlada Federaalka ay sameyso barnaamijo gaara oo ay ku uruurineyso dhaliisha loo jeedinaayo, ka hor inta mucaaradka aysan la wadaagin Saxaafada xorta ah, waana tan kaliya oo ay ku hor maraan Dowladaha hanaqaaday.
Dunida tagtay waxaa laga rumeysan yahay in Dowlad waliba ay tixgalin gaara siiso qodobada aan kor kusoo qornay oo laf dhabar u noqon kara hanaqaadka Dowlad wanaagsan.
Dhaliilaha ugu badan ee iminka loo jeediyo Dowlada Somalia ayaa ah la tashi la’aan iyo inaysan ahmiyad gaara siinin shaqsiyaadka miisaanka ku leh dalka.
Si kastaba ha ahaatee, Dowlada Somalia ayaa looga fadhiyaa inay tixgalin gaara siiso waxyaabaha ku xeeran jiritaanka Qaranka oo ay qeyb ka noqoneyso wadatashi.